(Video) Maamulka masjidka Towfiiq: Waa inaan ka qeybqaadano gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Muqdisho. - NorSom News
Maamulka masaajidka Towfiiq ayaa sheegay inay taageersanyihiin, isla markaana qeyb ka yihiin gurmadka lacag uruurinta ah ee loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii magaalada Muqdisho. Gudiga masaajidka ayaa soo jeediyay in arintaas si xoog leh looga qeybqaato, laguna dadaalo in si wadajir ah reer Norway ay wax u diraan.
Masaajidka Towfiiq ayaa sidoo kale sheegay inay maraakista iyo masaajidada Towfiiq ku xiran ee magaalooyinka Oslo ka baxan kuyaalo, ay qeybtooda ka qaataan gurmadka lacag uruurinta ah.
Hoos ka daawo muuqaalka qeyb kamid ah maamulka masaajidka oo si guud u iclaaminayo in gurmadka si wadajir ah looga wada qeybgalo.
Previous articleSweden: Ardeyda soomaalida Gotoberg oo bilaabay inay lacag u uruurinayaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho.
Next articleWiil soomaali ah oo kufsi ku eedeysan oo maxkamada ay 2 sano ku xukuntay